Ninja Spinki Challenges, lalao vaovao avy amin'ny mpamorona Flappy Birds | Vaovao IPhone
Tsy nahomby anao ve ny lalao iray amin'ireo karazana Flappy Bird tsy afaka atao? Vaovao tsara: Gears, ilay studio namorona ny lalao vorona goofy sy pixelated dia navotsotra Ninja Spinki fanamby, lohateny iray izay mitandrina kokoa amin'ny resaka sary sy feo, saingy mitazona haavon'ny fahasahiranana mitovy amin'ilay nandefa ny mpamorona azy ho malaza.
Ao amin'ny Ninja Spinki Challenge izahay tsy maintsy mifehy ninja isika raha ny teôria dia miofana ho mpiady tsara kokoa izy. Ankoatr'izay, raha nilaza izahay taloha fa ity anaram-boninahitra vaovao avy amin'ny mpamorona Flappy Bird ity dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny antsipiriany, dia nifantoka tamin'ny fanomezana karazana ihany koa izy: hisy aza ambaratonga 30 total Anisan'izany izay tsy maintsy ilaintsika, ohatra, saka saka, manipy kintana amin'ny tanjona kendrena, hialana amin'ny bikan'ny baomba na ialana amin'ny voankazo sasany manohina antsika amin'ny fitsambikinana azy ireo.
Ninja Spinki Challenge dia hametraka ny hozatrao indray
Ho vitantsika ny handalo ny ambaratonga tsirairay raha vao 10 segondra lasa izay nanomboka ny tsirairay, izay amin'ny voalohany dia toa tsotra (tsy izany). Fa raha ny tadiavintsika dia fanamby lehibe kokoa, isaky ny mandalo ambaratonga iray isika dia ho hita ao Mode tsy misy farany, izay midika fa hitombo sy hitombo ny fahasahiranana tsy hijanona mandra-pahatongan'ny ninja namely sy resy. Rehefa milalao amin'ny "Endless" isika dia tsy maintsy manangona kintana ihany koa, izay toa ny rafitra scoring amin'ity lalao ity tamin'ny voalohany.
Raha manontany ahy ianao hoe inona no eritreretiko momba ireo Fanamby Ninja Spinki ary tsy maintsy milaza ny marina aho dia hiteny aho fa mieritreritra mahaliana kokoa noho ny famoronana Gears hafa. Ny "pique" dia mbola eo, saingy toa mora azo sy mahafinaritra kokoa noho ny lohateny toy ny Swing Copters izay misy ny fahafinaretana amin'ny famatorana ny hozatrao, mahazo isa ambony ary milaza izany. Raha ny marina dia nitsiky foana aho nandritra ny fotoana nanandramako nanoratra ity lahatsoratra ity, ka heveriko fa mendrika izany. Efa nanandrana ve ianao? Ary ahoana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ninja Spinki Challenge, lalao tsy azo atao vaovao avy amin'ny mpamorona Flappy Birds
Apple Manatevin-daharana ny fiaraha-miasa amin'ny AI hiara-hiasa amin'ny faharanitan-tsaina